कांग्रेसप्रति मतदाताको विश्वास छ, जीत सुनिश्चित भईसक्योः भुपबहादुर डाँगी – RaptiSandesh
Home / Election / कांग्रेसप्रति मतदाताको विश्वास छ, जीत सुनिश्चित भईसक्योः भुपबहादुर डाँगी
कांग्रेसप्रति मतदाताको विश्वास छ, जीत सुनिश्चित भईसक्योः भुपबहादुर डाँगी
१) के छ निर्वाचन तयारी ?
यस पटकको निर्वाचनकालागि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकढिक्का भएर लाग्नुभएको छ । केन्द्र, जिल्ला तथा क्षेत्रले बनाएका प्रतिवद्धता पत्रहरु जिल्ला, गाँउ, टोल तथा घरघरमा पु¥याएका छौ । हामीले के ग¥यौ के गर्नेछौ भनेर उमेद्वारहरुलाई जानकारी गराउदै भिजिटिङ कार्ड सहित पनि हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु घरघरमा पुग्नुभएको छ । १२ गते घोराहीमा विशाल आमसभा गर्ने तयारीमा पनि रहेका छौ ।
जसमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोईराला, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहने छ ।
२) यो निर्वाचनमा कांग्रेस नै विजयी हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ?
हामी विजयी हुने आधारहरु त धेरै नै छन् । मतदाताहरुलाई कांग्रेस र लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ । त्यो विश्वासले हामीलाई मतदाताहरुले मत दिनुहुन्छ । अर्को कुरा जनतालाई शान्ति र विकास चाहिएको छ । त्यो शान्ति र विकास कांग्रेससँग मात्र छ ।
कांग्रेसबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले मतदाताहरुले कांग्रेसलाई मत दिनुहुन्छ । यस्तै दाङमा कांग्रेसको संगठन बलियो छ । त्यो बलियो संगठनले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउछ । दाङमा भएका हरेक विकास कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । बहुदलदेखी हालसम्म कांग्रेसले नै जिल्लाका हरेक गाँउगाँउमा विद्युत, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, सिचाई, खानेपानी पु¥याएको छ । त्यो सबै जनता अर्थात मतदाताहरुले बुझेको र जानेको विषय हो । त्यसैले पनि मतदाताहरुले कांग्रेसलाई मत दिनुहुन्छ र कांग्रेस विजयी हुन्छ । यसका साथै यस क्षेत्रको अर्थात दाङ जिल्लाको विकास गर्न सक्ने क्षमता भनेको कांग्रेससँग मात्र छ त्यसैले पनि कांग्रेस विजयी हुन्छ ।
३) किन मत दिने कांग्रेसलाई मतदाताले ?
मतदाताहरुमा कांग्रेप्रतिको विश्वास छ त मैले अगाडी नै भनिसके । यो सँगै लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि मतदाताहरुसँग छ । मतदाताहरुले शान्ती चाहिएको छ । समृद्धि चाहिएको छ । विकास र निकास चाहिएको छ । समग्रमा भन्दाखेरी शान्ति र समृद्धि, विकास र निकासकालागि मतदाताहरुले कांग्रेसलाई मत दिनुहुने छ ।
४) स्थानीय निर्वाचनमा तपाईमाथी कांग्रेसले नै घात गरेर पराजीत हुनुभयो, यसपटक घात हुने संम्भावना देख्नुहुन्छ कि नाई ?
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा म कांग्रेसको तर्फबाट उमेद्वार थिए । प्राविधीक रुपमा मैले निर्वाचन जित्न सकेन । त्यसपछि मैले धेरैपटक मिडियाहरुमा पनि भनेको छु । कार्यक्रमहरुमा पनि भन्ने गरेको छु हामीले निर्वाचन अन्तरघातले हारेका हैनौ । त्यसलाई अन्तररघात भन्न मिल्दैन । हाम्रो पार्टिले टिकट घिला गरिमात्र प्रदान ग¥यो । १९ वटा वडाहरुमा ६ दिनमा मात्र चुनावी कार्यक्रम गरेका हौँ ।
नेताहरु जे आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौ । त्यसकालागि समय नै थिएन हामीसँग । त्यसैले हाम्रा प्राविधीक कमजोरीले निर्वाचनमा पराजित भएका हौँ । अब त्यो कमजोरीमा हामीमा छैन । त्यो कमजोरीलाई हामीले सच्याईसकेका छौ । अहिले दाङमा कांग्रेसभित्र कुनै तित्तता छैन । सबै एकढिक्का भएर अगाडी बढ्नुभएको छ । पार्टिका नेताहरुदेखी तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरु पनि कांग्रेसलाई कसरी विजयी बनाउने ।
कांग्रेसलाई जिताएर कसरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, देश र जिल्लालाई शान्ति र समृद्ध कसरी बनाउने, विकास र निकासको बाटोमा देशलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर हामी सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक भएर लागिपरेका छौ । जिल्लाका ९ वटै क्षेत्रमा कांग्रेसले विजयी हासिल गर्छ ढुक्क हुनुस् ।
Previous: राजु खनालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट के–के विकास गरे(हेर्नुस्)
Next: बाँदरमुढे पीडितलाई माओवादी धम्की : पुरानो घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाए ज्यान जान सक्छ